काठमाडौं। पहिला पहिले माईग्रेनलाई भ्यास्कुलर रोग भनिन्थियो । तर, अहिले यसलाई न्युरोलोजिकल रोग भनेर भन्ने गरिन्छ। माइग्रेन एक प्रकारको टाउको दुखाइ हो, जुन निकै कडा हुने गर्दछ। यसको कारणले टाउको दुखेमा कम गर्न गाह्रो...
सा–सानो पुँजीलाई एकीकृत गरी ठुला जलविद्युत तथा उर्जा विकास आयोजना लगानी गर्नुलाई पुँजी बजार भनिन्छ । कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले सेयर जारी गरेर आफ्नो योजना पुरा गर्न सक्दछन् । यसका लागि पब्लिक लिमिटेड...
आमसञ्चार तथा पत्रकारिताको स्नातकोत्तर तहमा सार्क मिडिया विषयको हालै सम्पन्न परीक्षामा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले सोधेको प्रश्न थियो– सदस्य राष्ट्रबीचको आफ्नै कारणले सार्कले आफ्नो १९ औँ शिखर सम्मेलन त आयोजना गर्न सकेको छैन, दक्षिण एसियाली क्षेत्रको...
पाठेघर बाहिर नली, डिम्बासय, पेट र पहिला अप्रेशन गरेको पाठेघरको घाउमा गर्भ रहेको अवस्थालाई इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भनिन्छ । इक्टोपिक प्रिग्नेन्सी प्राय जसो महिनावारी रोकिएको दुईदेखि चार हप्तामा थाहा पाउन सकिन्छ । यस प्रकारको गर्भावस्थामा बच्चाको...
साग बेच्नेसँग कर उठाएर देश विकास गर्ने सरकारको यो कस्तो नीति ? ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान
२०७५ भदौ १ गते १०:३५ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान
राज्यले के गर्नका लागि कर उठाउँदै छ भन्ने कुरा सबैले बुझनुपर्छ । कर राज्य सञ्चालनको लागि हो कि विकासका लागि । विकासका लागि हो भने करबाट उठेको रकम मात्र प्रयाप्त हुदैंन । नेपालको विकास...
बसेर पूजा गर्नु, भाँडा माझ्नु र सुकुलमा बसेर खाना खानु मेरुदण्ड दुखाईको मुख्य कारण
२०७५ साउन २६ गते १९:३८ डा सुनिल पौडेल
मेरुदण्डको दुखाई समस्याबाट विश्वका लाखौं मानिसलाई पिरोलिरहेको छ । विश्वव्यापी रुपमा हेर्ने हो भने टाउको दुख्ने भन्दा पनि खतरानक दुखाई भनेको ब्याकपेन हो । हाम्रो देशमा यो रोगको अवस्था भयावह छ । किनभने मेरुदण्ड...
मलाई हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रको केही ऐतिहासिक पक्ष गजब लाग्छ । विसं १८७१ मा जतिखेर अंग्रेजसँग लडाईं भइरहेको थियो, भिमसेन थापाले आफ्नो तलब वर्षको ६४०० बाट बढाएर १०,४०० पुर्‍याए । जुन सुनको भाउसँग तुलना गर्ने...
डा गाेविन्द केसीका गलत मागहरू र देशकाे स्वास्थ्य शिक्षाकाे वास्तविक अवस्था
२०७५ साउन ६ गते २२:११ लेखकद्वय
डा. गोविन्द केसीले गरिबप्रति लक्षित गरी उठाएका आवाज र समाज परिवर्तनका लागि प्रदर्शन गरेको साहस तथा प्रतिबद्धता निकै सह्रानीय छ । यद्यपि, चिकित्सा शिक्षा तथा सेवालाई विपन्न लक्षित बनाउनुपर्ने भन्दै उहाँले यतिबेला आफ्ना निजी...
काठमाडाैं । नेपालको स्थीर सरकार नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बलियो सरकार तपाईहरुले भन्दै आइरहनु भएको छ । यस अर्थमा मैले पनि केहि बोल्नै पर्ने हुन्छ । अहिले प्राइभेट सेक्टर बढी जिम्मेवार, बढी दूरदर्शीतापूर्वक सरकारसँग सहकार्य...
किन भयाे एफपीओको बेहाल ? सोच, नीति र विधिमा खोट
२०७५ असार १४ गते १०:१६ रामकृष्ण पौडेल
काठमाडौं । एनएमबी बैंकले निष्काशन गरेको एफपीओ छोटो अवधिमा बिक्री भएन । ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको एफपीओ निष्काशन गरेको १५ दिनसम्ममा २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको मात्रै आवेदन परेको छ । छोटो...
बैंकले दिने भन्दा मार्जिन ट्रेडिङबाट पाइने ऋण महंगो हुनेछ-रेग्मी
२०७५ जेठ २९ गते ११:१७ प्रीयराज रेग्मी
काठमाडौं । पूँजी बजारको दिगो विकास प्रस्थान विन्दु भनेको नीतिगत व्यवस्था नै हो । त्यसका संरचनाहरुको निर्माण र प्रबिधीमैत्री वातावरणले सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसकै आधारमा टेकेर नेपालको पूँजी बजारको विस्तार र विकास गर्न सकिन्छ...
सेयरमा लाभकरः पाडी त सित्तैमा पाकाे हाे तर लैनाे भैंसीलार्इ महँगाे परेकाे छ सरकार
२०७५ जेठ २१ गते २०:१५ रामकृष्ण पाैडेल
सरकार पुँजी बजार मैत्री छैन भन्ने लगानीकर्ताको शंका क्रमिक रुपमा यथार्थमा परिणत हुँदै आएको छ । सुरुमा सेयर बजार उत्पादनशील क्षेत्र होइन भन्ने अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति विवादास्पद रह्यो । त्यसपछि बजेटमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले तिर्दै आएको...
पछिल्लो समय बैंक र बीमा कम्पनीबीच बैंक्यास्योरेन्स गर्ने समझदारी भएको कर्पोरेट समाचारहरु धेरै प्रकाशित हुने गरेका छन् । बैंक्यास्योरेन्स भनेको बैंक बीमा कम्पनीको संस्थागत एजेन्ट बन्नु हो । बैंकमा आएका ग्राहकलाई बीमा सेवा पनि...
२०७५ जेठ १ गते १४:३७ विरबिक्रम रायमाझी
जनस्तरमा बीमा बारे ज्ञान र बीमाको अभ्यास कम भएकोमा चर्चा धेरै हुन्छ । तर सरकारी अधिकारीहरुमा नै बीमाको ज्ञान छैन, बीमा गर्ने तत्परता छैन, बीमाको लागि बजेट राखिदैन । यसले नेपालको बीमाको विकास कुन...
२०७५ जेठ १ गते १४:१६ सुनिल बल्लभ पन्त
नेपाली अर्थतन्त्रमा बीमा र बैकिङ क्षेत्रको संस्थागत विकास अरु क्षेत्रको तुलनामा राम्रो छ । १९९४ सालमा नेपाल बैंकको स्थापना भयो । त्यसको एक दशकपछि २००४ मा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी स्थापना भयो । नियामक निकाय...
२०७५ जेठ १ गते १३:५१ विक्रान्त पाण्डे
एक रुपैयाँ हराउँदा वास्तै हुँदैन । १० रुपैयाँ हरायो भने पनि खोजी हुँदैन । ५० रुपैयाँ हरायो भने कार पार्किङमा तिरे कि भनेर माया मारिन्छ । यसको अर्थ थोरै पैसा गुमाउँदा मान्छेलाई ठूलो असर...
« अघिल्ला 1 …78910 11 … 16 पछिल्ला »